:: My Little World ::: ရေလိုက် ငါးလိုက် - စိုင်းထီးဆိုင်
Posted by Nay Nay Naing at 9/26/2008 06:15:00 PM
:) ဟုတ်တယ်ဗျ ။ မှားတယ်ရယ်လည်း မဟုတ်ဘူး ။ နည်းနည်းလေးတွေ လွဲနေတာလေးတွေပါ ။ သီချင်းနားထောင်ရင်းနဲ့ စာသားလေးတွေ သေချာ ပြန်လိုက်ဖတ်ကြည့်ရင် တွေ့ပါလိမ့်မယ် ။ ဒီသီချင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ။
ကောင်းတယ် အရမ်းကြိုက်တယ်။ စာသားတွေက
Friday, September 26, 2008 10:43:00 PM
ငယ်တုန်းက သူ့သီချင်းနားမထောင်ပဲ မအိပ်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးတာ ခုတော့ အိပ်မက်လိုဖြစ်နေပြီ သီချင်းတွေနဲ့ ဝေးခဲ့တာ ခု ပြန်ဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုယ်နဲ့မင်းပြောင်းပြန်လုပ်ရဲမှာလား လို့ မှတ်မိနေတယ်
နေခြည်ဝင်းသို့ ရှင်းရှင်းပဲ လျှပ်ရောင်ပြက်သို့လက်ကနဲပဲ ပါ
စာလုံးပေါင်းမှားတာလေးတွေက ရုပ်ဆိုးနေလို့ ထောက်ပြရင် စိတ်မဆိုးဘူးထင်ပါတယ် ရှင်သန်ရုံ တော်ရုံ ဖုံထူ ချောင်းကိုပစ် လို့ စာလုံးပေါင်းပါတယ်
Friday, September 26, 2008 10:53:00 PM
ကျွန်တော် အဲဒီသီချင်းကို ဒီ Post မှာ ရေးဖူးတယ်။ မနေ ရေးထားတာနဲ့ သီချင်းစာသား သိပ်မတူဘူးခင်ဗျ။ မနေနဲ့တော့ အကြိုက်ချင်း တူပါတယ်။
Friday, September 26, 2008 11:55:00 PM
ပြင်ပေးသလို ဆိုခဲ့ဖူးတယ် ထင်တယ်.. ဒါပေမယ့် နားထောင်ကြည့်တော့ တမျိုးကြားနေလို့ ကြားတဲ့အတိုင်းရေးလိုက်တာ...
စားလုံးပေါင်းပြင်တာကို စိတ်မဆိုးပါဘူး.. ကျေးဇူးတောင် တင်ပါသေးတယ်.. ကျွန်မက စာရေးရင် သတိထားမိရင် နည်းနည်းတော်သေးတယ်.. ဒီတိုင်းသာ ချရေးလိုက်လို့ ရတော့ စာလုံးပေါင်းက မှားသလားမမေးနဲ့:-)..
Anonymous၊ မုဒိတာ နဲ့ဒီနေရာမှာ သီချင်းကြိုက်တာချင်းတူသွားတဲ့ Link ပေးခဲ့တဲ့ JulyDream.. ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ JulyDream ရဲ့လင့်ကိုလည်း သွားကြည့်ဖြစ်တယ်။ :-) အခု အတော်လေး အိပ်ငိုက်နေလို့အိပ်တော့မယ်.. ကောင်းသောညပါ။
Saturday, September 27, 2008 12:26:00 AM
အမေရိကား က တို.သူငယ်ချင်း က လည်း သိတ် ကြိုက်တာ. ..သူအမြဲ ဖွင်.တော. အမေရိကား မှာ မွေးတဲ့ သား ပိစိ လေး က စိုင်းထီးဆိုင် သီချင်း ကို ဆို ညည်းတတ်တယ်။ ဂျိတ်းဖော သ……….ဂျိန်းဖောသူ ……….ဆိုပြီး….